Manome famatsiam-bola amin'ny fiarovana ny biby any Tanzania ny governemanta Alemanina
Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Manome famatsiam-bola amin'ny fiarovana ny biby any Tanzania ny governemanta Alemanina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Travel Wire News
Septambra 20, 2021
Ambasadaoro alemanina any Tanzania Regine Hess
Ao Tanzania maoderina, ny toerana voaaro amin'ny fiarovana ny ala sy ny bibidia dia mahatratra 29 isan-jaton'ny tontolo. Ny 13 isan-jaton'ny firenena dia natokana ho an'ny valan-javaboary sy ny faritra fitehirizana lalao ho an'ny indostrian'ny fizahantany.
Nanitatra ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny governemanta Alemanina amin'ny famatsiam-bola amin'ny fiarovana ny bibidia sy ny natiora any Tanzania tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa roa tonta eo amin'ireo firenena mpiara-miombon'antoka nentim-paharazana amin'ny fampandrosoana fizahan-tany.
Rehefa nanamarika ny enim-polo taonan'ny fahaleovantenany i Tanzania dia manohy mahazo fanampiana ara-bola avy any Alemana amin'ny fiarovana ireo valan-javaboary manan-danja indrindra izay loharano lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany.
Amin'ny maha mpiara-miombon'antoka amin'ny fiarovana ny biby dia ny fanjakana alemanina dia nanao sonia ny fifanarahana fanomezana mitentina 25 tapitrisa Euro ho famatsiambola maharitra ny tetik'asa tontolo iainana voaaro ao Tanzania.
Ny tanzania valan-javaboary Tanzania dia nilaza tamin'ny fanambarana vao haingana fa ny fifanarahana vita sonia dia handrakotra ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana any Katavi sy Mahale any amin'ny faritra atsimon'ny Highlands sy ny faritra fizahantany any Tanzania.
Ny tetik'asa fiarovana dia hiompana amin'ny Serengeti Ecosystem Development Conservation Program (SEDCP II). Ny sasany amin'ireo hetsika izay hotanterahina ao Serengeti dia manamafy ny fiarovana ny harena voajanahary ao.
Ny governemanta Alemanina dia manolo-tena ihany koa hanohana ireo valan-javaboary dimy vao natsangana ho fiarovana ny bibidia maharitra sy fampandrosoana ny fizahan-tany any Tanzania sy Afrika.
Vao tsy ela akory izay, ny fifantohan'ny fiaraha-miasa eo amin'i Alemana sy i Tanzania dia ny fiarovana ny Valan-javaboary Mahale sy Katavi ary ny lalantsaran'izy ireo.
Serengeti National Park sy Selous Game Reserve no valan-javaboary manan-danja sy mitarika bibidia any Afrika eo ambany fitohanan'ny fiarovana ny alemana.
Tamin'ny taona 1958, Prof. Grzimek sy Michael zanany lahy dia nanomboka ny fianaran-dry zareo voalohany tany Serengeti sy ilay fanadihadiana fanadihadiana hoe “Tsy ho faty i Serengeti”.
Serengeti izao no faritra arovan'ny bibidia malaza eto Afrika.
Ny sehatry ny fizahan-tany ao Jamaika dia mitondra toe-karena matanjaka ...
Sambatra ny fipetrahana any Seychelles: tsiron'ny paradisa!
Fifanarahana vaovao nohamafisin'ny Pan Pacific ...
Dale N Bickenbach hoy:
September 20, 2021 ao amin'ny 13: 41
Tena tsara ny lahatsoratra. Rehefa avy nitety ny Serengeti aho dia hitako fa talanjona tamin'ny fampifanarahana ny herin'ny masoandro sy ny havaozina noho ny fijerena ireo biby mampinono hafa mieritreritra ny orinasany manokana. Hatramin'ny naha-mpisava lalana trano any Deutschland ary nihatsara ny programa maodely tany Amerika Avaratra dia manantena aho fa ny fanesorana bebe kokoa ny fampiasana solika fosil any Serengeti, ary Tanzania amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny teknolojia maoderina tsara indrindra nefa mitazona ny tontolo iainana mifanentana amin'ny biby mampinono sy ny fizahan-tany ho an'ny olombelona. Fifandraisana liana no hankasitrahana. Misaotra